यस्तो व्यक्ति कहिल्यै ‘उभो’ लाग्दैन !::Hamro Koshi Awaj / awaz
यस्तो व्यक्ति कहिल्यै ‘उभो’ लाग्दैन !
‘जे रोप्यो त्यो फल्छ’ भनेझैं हरेक कुरा व्यक्तिको सोचाइमा भर गर्छ । व्यक्तिको सोचाइको आधारमा नै उसको हेराइ र व्यवहार गराई तय हुने गर्छ । त्यसैले सोच बदलौं । सकारात्मक सोचाइको विकास गरौं । किनकी सकारात्मक सोचाइले नै सकारात्मक मनोवृत्ति निर्माण गर्छ । साथै जीवनलाई निश्चित गन्तव्य सम्म आत्मसन्तुष्टिका साथ पुरयाउन सक्छ ।
तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सकारात्मक सोचाइ भन्दैमा वा जप्दैमा सकारात्मक सोचाइ भने निर्माण हुने होइन । यस सम्बन्धमा केही प्रसिद्ध लेखकहरूको विचार यस्तो रहेको छ–डेनिएल जे लेभिटिनका अनुसार आजको नव आधुनिक युग भनेको प्रशस्त सूचनै सूचनाहरूले भरिएको युग हो । यस युगले व्यक्तिको मस्तिष्कलाई एक ठूलो चुनौती सिर्जना गरेको छ । यसकारण असल र सफल जीवन जिउनका लागि उसले आफ्नो मस्तिष्कलाई सङ्गठित गर्न जान्नुपर्दछ । किनभने सङ्गठित मानव मस्तिष्कमा नै सङ्गठित जीवन सम्भव रहेको हुन्छ ।
त्यसैले आवश्यकता र उपयुक्तताको सिद्दान्तको आधारमा सूचना अर्थात् जानकारी विभिन्न माध्यमबाट सङ्कलन गर्नुपर्छ । व्यक्तिले जानकारीको आधारमा होइन ज्ञानको आधारमा आफ्नो विचार निर्माण गर्नुपर्छ । कुनै पनि कार्यमा समय लगानी गर्दा कार्यप्रति मस्तिष्कको ध्यानाकर्षण अधिकतम बनाउनुपर्छ । यसको लागि एक पटकमा एउटा तर प्राथमिकताको आधारमा महत्वपूर्ण कार्य गर्नुपर्छ । आफ्नो लक्ष्यअनुकुलको जानकारी छनौट गर्नुपर्छ । कार्य गर्दै जाँदा थकान महसुस भएमा क्षणिक आराम पनि गर्नुपर्छ ।
अन्यथा व्यक्तिको मष्तिष्कमा कोर्टिसोल हार्मोन पैदा हुन गई तनाव सिर्जना हुन्छ । जसले एकातिर व्यक्तिको सम्बन्ध बिगार्छ भने अर्कोतिर डरलाग्दो रोग पनि निम्त्याउन सक्छ भन्ने कुरा उसले आफ्नो पुस्तक ‘द ओर्गनाइज्ड माइन्ड’ मा उल्लेख गरेका छन् । टी हार्व एकरले आफ्नो पुस्तक ‘सेक्रेटस् अफ मिलिनियर माइन्ड’ मा व्यक्तिको मस्तिष्कलाई कम्प्युटरसँग तुलना गर्दै नयाँ प्रोग्रामिङमार्फत् हरेक व्यक्तिले आफ्नो जीवनमा असल स्वास्थ्य, आर्थिक सम्पन्नता र खुशी हासिल गर्न सक्छ । यसको लागि स्पष्ट आर्थिक योजना निर्माण गर्नुपर्छ । जुन उच्चस्तरको सोच्न निर्माण गर्न सक्ने व्यक्तिको मस्तिष्कको क्षमतामा भर पर्छ ।
जर्मन लेखक जेम्स एलेनले आफ्नो पुस्तक ‘एज अ मेन थिङ्केट’ मा विचारबाट शब्द, शब्दबाट कार्य, कार्यबाट बानी, बानीबाट गन्तव्यसम्म पुग्ने भएकोले विचारको शक्तिलाई हरेक व्यक्तिले अनिवार्य महसुस गर्नुपर्छ । व्यक्ति आज जुन स्थितिमा छ, त्यो उसको विचारको परिणाम हो । विचारमा शुद्धता हुनु अनिवार्य छ किनभने विचार नै वास्तविकतामा रुपान्तरण हुने गर्दछ । विचारको वास्तविक मालिक स्वयम् व्यक्ति नै भएकोले मनरुपी बगैंचामा बिऊ रुपी असल विचार रोप्न सकेको खण्डमा मनोविकार निमिट्यान्न पार्दै असम्भव कुरा पनि सम्भव बनाउन सकिन्छ । व्यक्ति आफ्नै कारणले सिर्जना भएको परिस्थितिलाई सुधार गर्न तनाव सहित निरन्तर तल्लीन रहन्छ । तर उसले आफ्नो मनको स्थितिमा कुनै खोट देख्दैन बरु उल्टै प्रतिकुल परिणामको दोषी अरूलाई बनाउँछ भने त्यस्तो व्यक्तिले जीवनमा कहिल्यै प्रगति गर्न सक्दैन ।
स्पष्ट योजना, उच्च परिकल्पना र पूर्ण त्यागसहितको अधिकतम प्रयास र अभ्यासले अरूद्वारा आर्जन गरेको प्रगतिमा पनि कमजोर विचार बोकेका व्यक्तिले तिनीहरूको भाग्यको उपज हो भनी स्वीकार गर्छन् । तर त्यो उपलब्धिको पछाडि व्यक्तिको विचारले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको कुरामा भने हेक्का राख्दैनन् । त्यसैले हरेक व्यक्तिले आफ्नो सपनालाई साकार पार्न चाहन्छ भने सोचाइद्वारा सिर्जना हुने विचारको शक्तिलाई अनिवार्य स्वीकार गर्नु नै पर्छ भन्ने कुरामा जोड दिएका छन् ।
त्यस्तैगरी अर्का प्रसिद्ध युटुबर तथा ‘द र्युडेस्ट बुक एभर’ का लेखक स्वेताब ग्याङ्वारका अनुसार हरेक मान्छेले आफूलाई अरुले स्वीकार गर्ने किसिमको विशेष वस्तुको रुपमा स्थापित गर्नुपर्छ । मान्छे अजीवका प्राणी हुन्छन् । उसले दिने स्वीकृति वा अस्वीकृतिलाई सामान्य रुपमा लिनुपर्छ । बाह्य व्यक्तिले दिने अनुमोदनलाई होइन आत्मसन्तुष्टिमा पूर्ण विश्वास गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ । आत्म सन्तुष्टिलाई जीवन जिउने प्रमुख आधार बनाउनु पर्छ । हरेक मान्छेले आफूलाई एक राष्ट्रको राष्ट्र प्रमुखको रुपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । आफ्नो मूल्य, मान्यता र अनुशासनलाई सुरक्षा कवचको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । अहङ्कारलाई विरोधी शक्तिको रूपमा र आत्म सम्मानलाई खुशीको सूचकको रुपमा बुझ्नुपर्छ । अन्धभक्त भएर होइन तथ्य सत्यको आधारमा मात्र कसैको विचारलाई समर्थन वा विरोध गर्नुपर्छ । मान्छे आफैले सोच्ने, खोज्ने, रोज्ने र अगाडि बढ्ने कार्य गर्नुपर्छ । यसको लागि मान्छेले के सोच्ने भन्दा पनि कस्तो सोच्ने भन्ने कुरामा लेखकले जोड दिएका छन् ।
डेल कार्निगीले आफ्नो पुस्तक ‘हाउ टु वीन फ्रेन्ड्स एण्ड इन्फ्युएन्स् पिपुल’ मा सफलता हासिल गर्न एक असल व्यक्तिले आलोचना होइन हँसिलो मुद्रामा अरुको हित अनुकुल हुने गरी व्यवहार प्रर्दशन गर्नुपर्छ । तर्क र विरोध होइन अरूलाई सम्मान दिन जान्नुपर्छ र उनीहरूका कुरा अनिवार्य सुन्न पनि सक्नुपर्छ । यसको लागि उच्च स्तरको सोचको विकास गर्नुपर्छ भन्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
लेखकः धरानका निजी शिक्षालयका अध्यापक हुन् ।